माउण्टेन इनर्जीको प्रि–अलोटमेन्ट आज हुँदै, कति जनाले पाउलान आइपीओ ? « Dainiki
१४ मंसिर २०७७, आईतवार ०९:४४
१४ मंसिर,काठमाडौँ । माउण्टेन इनर्जीको आइपीओ प्रि–अलोटमेन्ट आज हुने भएको छ । आइपीओ बाँडफाँटको तयारी स्वरुप प्रि–अलोटमेन्ट आइतबार हुन लागेकाे बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङले जनाएकाे छ । प्रि–अलोटमेन्ट गरेको ३ दिन भित्र आइपीओ बाँडफाँट गर्ने प्रावधान रहेकाले बुधबारसम्म बाँडफाँट गरिने नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङले जनाएको छ ।
मेरो शेयरमा आएको समस्याले समयमै आवेदन भेरीफाई हुन नसक्दा माउण्टेनको आइपीओ बाँडफाँटमा ढिलाई भएको बिक्री प्रबन्धकले बताएका छन् । कुन दिन बाँडफाँट गर्ने भनेर अन्तिम निर्णय भने भइसकेको छैन । माउण्टेन इनर्जीको आइपीओमा माग भन्दा बढी आवेदन परेकाले गोलाप्रथाबाट शेयर बाँडफाँट हुनेछ ।
यसमा कुल १ अर्ब ३९ करोड ४४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बरारको आवेदन परेको हो । जसमा ६ लाख ७४ हजार जनाले १ करोड ३९ लाख ४४ हजार ४१० कित्ताका लागि आवेदन दिएका छन् । यो सर्वसाधारका लागि बिक्री खुला गरिएको १८ लाख ३० हजार २६५ कित्तालाई आधार मान्दा ७.६१ गुणा बढी आवेदन हो ।
ग्रिनलाइफ हाइड्रोपावरले पायो आईपिओ निष्काशन अनुमति
८ माघ, काठमाडौँ । ग्रिनलाइफ हाइड्रोपावरले सर्बसाधारणलाई आईपिओ निष्काशनको अनुमति पाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गरेको हो । कम्पनीले ३४ करोड
प्रधानमन्त्रीद्धारा १० लाख डोज कोभिड भ्याक्सिन ग्रहण
८ माघ, काठमाडौँ । ग्रिनलाइफ हाइड्रोपावरले सर्बसाधारणलाई आईपिओ निष्काशनको अनुमति पाएको छ । नेपाल धितोपत्र
महिला सहयात्रा लघुवित्तले घोषणा गर्याे लाभांश, नगद र बोनस कति ?
८ माघ, काठमाडाैँ । महिला सहयात्रा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले लाभांश घाेषणा गरेकाे छ ।
८ माघ, काठमाडौँ । नेपाली बजारमा बिहीबार सुनको मूल्य वृद्धि भएको छ । बिहीबार सुनकाे